Kufanele Uyibekephi Imizamo Yakho Yokumaketha ngo-2020? | Martech Zone
NgoMsombuluko, Januwari 27, 2020 NgoMsombuluko, Januwari 27, 2020 Douglas Karr
Njalo ngonyaka, ama-Chief Marketing Officer aqhubeka nokuqagela nokusunduza amasu abona ukuthi ahamba phambili kumakhasimende abo. Abezokuxhumana bePAN bahlala benza umsebenzi omuhle wokuqoqa kahle nokusabalalisa lolu lwazi - futhi kulo nyaka bafake imininingwane elandelayo, 2020 CMO Ukubikezela, ukwenza kube lula.
Ngenkathi uhlu lwezinselelo namakhono lubonakala lungapheli, ngikholwa ukuthi angabiliswa kancane ezindabeni ezi-3 ezihlukile:
Zensizakalo - Amathemba namakhasimende bafuna ukuzenzela bona, futhi lokho kudinga ukuthi abathengisi benze umsebenzi oncomekayo wokuhlinzeka ngokuqukethwe okudingekayo, okwenza kube lula ukugaya, futhi banikeze noma yimaphi amathuluzi adingekayo ukusiza ukuqondisa uhambo lwabo.
Ukuqondaniswa Kwesiteshi - Amathemba namakhasimende asebenzisa inqwaba yeziteshi ukwazi ngemikhiqizo nezinsizakalo zakho - kusuka kubameli bezokuxhumana kuya ekusatshalalisweni nasekukhushulweni kokuqukethwe. Uhlu luyabamangaza futhi luyabamaketha namuhla. Kulezi zibikezelo, uzobona ukulayishwa kokuqukethwe ukukhathazeka okukhulu. Abakhangisi badinga ukusebenzisa ubuchwepheshe, bashumeke izinqubo ze-agile, baphinde babeke imininingwane imininingwane edingwa amabhizinisi nabathengi kuwo wonke ama-mediums uma benethemba lokufinyelela kulokho ababhekiswe kukho.
Ukuqondisa - Kanye nokuba yi-omni-channel, abathengisi kumele bakhombe futhi benze ngezifiso okuqukethwe uma benethemba lokuzibandakanya namathemba abafisa ukufinyelela kuwo noma amakhasimende abafuna ukwakha inani elithe xaxa ngawo. Lokhu, futhi, kudinga amathuluzi namasu okwenza lokhu. Uma inkampani ye-B2B, ngokwesibonelo, ingaphindaphinda amacala okusetshenziswa, amaphepha amhlophe, namakhasi okufika ukuze ikhombe izimboni, iziqu zemisebenzi, noma nosayizi webhizinisi, okuqukethwe kuzohambisana nebhizinisi elizoba khona.
Njengoba iPAN Communications ifingqa:
Inselelo yokuqala ebalulwe ekubikezelweni kwalo nyaka yikhono lokusika umsindo futhi lilethe izinga lesipiliyoni samakhasimende elifunwa kumakethi wanamuhla.
Izibikezelo ze-2020 CMO: Ukugcwala kokuqukethwe, ukumela, idatha yamakhasimende nokwenza okomuntu siqu kuhlale kunokubaluleke kakhulu
Akungatshazwa. Ngaphandle kwethalente, izinsizakusebenza, izinqubo, namasu wokuvumelanisa lezi zinhloso, inkampani yakho kungenzeka ukuthi ilenga ngentambo nje ngenkathi ikhiqiza izinqwaba zamasu angasebenzi. Isikhathi sokuhlehlela emuva uthole i- inqubo yokumaketha esheshayo lokho kusebenza kahle kakhulu futhi kusebenza kahle.
Tags: UBrian Fanzocgsukulayishwa kokuqukethweidatha yekhasimendeDK New MediaUJason wavukamartech zonematt heinzukuzenzelaUSteve krausubudala bethonyathuliumukumaketha okuphezulu